अन्तरवार्ता – Page4– JanaSanchar.com
संसदीय धारमा एमाले र गैरसंसदीय धारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय देखिएका छन् : लोकेन्द्र विस्ट मगर
नेपालमा जनयुद्ध शुरु गर्नुपूर्व ग्रामीण वर्गसङ्घर्षकै दौरानमा गिरफ्तार भई ७ वर्ष जेल जीवन बिताएर रिहा भई भारतको पटनामा पुनः गिरफ्तार भएका लोकेन्द्र बिष्ट मगरले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मा स्थायी कमिटी सदस्य रहँदा नै प्रचण्डसँगको वैचारिक मतभेदका कारण राजिनामा दिएर बस्नुभएको छ । उहाँ नेपालमा पुनः नयाँ क्रान्तिकारी..
देश क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको छ : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, महासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव त भएरै छाड्यो नि ? कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? हो चुनाव भयो तर संसदीय चुनाव नेपालको स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धिको निकास वा समाधान होइन भन्ने पनि साबित भइछाड्यो । काङ्ग्रेस, एमाले—माकेलगायत संसद्वादी, संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादीहरूले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पूरा भएको, क्रान्ति आवश्यक नभएको, अब शान्ति,..
नेपालमा चीनको हस्तक्षेप बढ्यो, अब भारतले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ : अशोक मेहता
भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जनरल अशोक मेहता नेपालको राजनीतिक मामिलामा गहिरो चासो राख्छन् । नेपाली भाषा बोल्नसक्ने मेहता नेपालका विषयमा नियमित कलम चलाउँछन् । भारतको द पायोनियर पत्रिकामा उनका लेखहरू नियमित प्रकाशित हुन्छन् । उनको भनाइ भारतीय संस्थापनको आवाजसँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ । नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनले भारी बहुमत पाएको..
नेपालमा वामपन्थीलाई जिताउन भारतको योगदान छ
२ पुस, काठमाडौं । नेपालमा आम निर्वाचन सकिएसँगै भारतीय मिडियामा नेपालसम्बन्धी समाचार र विचारहरु दिनहुँजसो छाउन थालेका छन् । नेपालमा वामपन्थीहरुको बहुमत आएसँगै भारतीय मिडियाले आत्तिँदै चिनियाँ प्रभाव बढेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल मामिलाका जानकार मानिएका भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले एउटा लेख लेखेर भनेका छन् कि..
शान्ति प्रकृया असफल र भङ्ग भएको छ,साथै नयाँ क्रान्तिको प्रकृया शुरु भइसकेको छ: हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’
चुनाव खारेजी अभियान कस्तो रह्यो ? समीक्षा कस्तो गर्नुभएको छ ? यो अभियान भव्यतापूर्वक सफल भएको छ । जनताले दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट आफ्नो राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु समाधान हुन सक्तैनन्, यसको समाधान वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु हो भन्ने चेतनाको विकास गरेका छन् । त्यसकारण नेकपाको नेतृत्वमा राज्यको दमनका बावजूद दलाल..
मोरङ — ६ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि नवनिर्वाचित सांसद नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानी : चुनावमा विजयी हुँदा कस्तो अनुुभव भइरहेको छ ? मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनताले विश्वास गरेर मलाई जिताएका छन्। म असाध्यै खुसी छु । जनता पनि खुसी छन्। विजयी भएको घोषणा भएदेखि लगातार ७ घन्टासम्म म खुसी साट्न जनताकै माझमा थिए । बिहान ५..
‘तुच्छ गाली नगरौं, भोलि पनि मिलेरै जानुपर्ने छ’
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हतारोमा थिए तर मुहारमा प्रसन्नता थियो । वाकपटुता देउवाको शक्ति आधार होइन । उनी छोटो र सूत्रमा कुरा गर्न रुचाउँछन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाझैं । त्यसमाथि निर्वाचनको मौन अवधि नजिकै आइसकेको सन्दर्भमा देउवा बढीभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्थे । त्यसैले मंसिर १७ गते धनगढीमा..
नेपालको माओवादी जनयुद्धलाई नजिकबाट रहेर सहयोग र समर्थन गर्नेमध्ये एक हुन् आनन्दस्वरुप बर्मा । उनी भारतीय वामपन्थी बुद्धिजीवि, पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक समेत हुन् । बर्मा केही समयअघि नेपाल आएका थिए । उनीसँग रातोखबरका लागि निर्देशक अनिल शर्मासहितको टीमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपालमा बाम–गठबन्धन चर्चामा छ । यो गठबन्धनले..
ल्याहारक्यालहरूको रजगजमा हामीले कसरी टिकट पाउनु – हिमाल शर्मा भन्छन
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका युवा नेता हिमाल शर्माले जनयुद्धको समयमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणमा २७ महिनासम्म नारकीय जीवन बिताए । माओवादी नेता कार्यकर्तालाई यातना दिएर तथा बेपत्ता बनाएर ‘कुख्यात’ बनेको भैरवनाथमा बस्दा शर्माले बाँचेर फर्किन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् । मान्छेले प्राण धान्न जे पनि गर्छ । उनले त्यही गरे,..
यो राज्यलाई हामी मान्दैनौँ, त्यसैले यसविरुद्ध लड्छौँ’ हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ जनयुद्धका दिनहरूमा प्रचण्डको निकै प्रशंसा गर्नेमध्येका एक हुन् । तर उनै विप्लव आज प्रचण्डका खरो आलोचक भएका छन् । जनयुद्ध सुरु गर्ने दिनहरूमा गरिएको अठोटलाई प्रचण्डले बीच बाटोमै छोडेको भन्दै त्यो ‘अधुरो..